Askari France ah oo dhaawac u dhintay
14 Jan 14, 2013 - 6:16:47 AM
Al-shabaab ayaa sheegtay Maanta [Jan 14, 2013 ] in Askari Faransiis ah oo ay ku qabteen howlgalkii Buurlo Mareer isagoo dhaawac qaba uu u dhintay dhaawicii soo gaarya, iyagoo sheegay inay shacabka u soo bandhigi doonaan goor dhow maydadka Askarta Faransiiska ee dagaalkaas ay ku dileen
Afhayeenka Milateriga ee Al-shabaab Sh. C/casiis Abu-Muscab ayaa sheegay in Askariga uu dhintay maanta, isagoo dhanka kalena sheegay in Denis Allex oo ahaa Sarkaalka la doonayay in lasoo furto uu nool yahay uuna caafimaad qabo.
“Waxaa Dhaawacyadii soo gaaray u dhintay Askari Faransiis ah oo aan ku qabanay Howlgalkii ka dhacay Deegaanka Buulo-Mareer, dhawaan ayaana shacabka u soo bandhig doonaa Maydadka Laba askari oo dagaalkaas lagu dilay” ayuu yiri Sh. Abu-Muscab.
Sidoo kale Abu-Muscab wuxuu sheegay in sarkaalkii Faransiiska ahaa ee ay horay gacanta ugu hayeena ay go’aan ka qaadan doonaan xili dhowr oo uusan sheegin xiliga ay noqon karto.
Dowlada Faransiiska ayaa horay u shaacisay in Denis Allex uu dhintay ayna la yaaban yihiin hadalka Al-shabaab ee ah inay hayaan isagoo nool, waxaana Madaxweynaha Faransiiska uu ku tilmaamay hadalkaas mid lagu qoslo.
“Allex waxaa toogasho ku dilay kooxihii gacanta ku hayay markii uu Howlgalku bilowday habeenkii Sabtida, mana jirto wax cadeynaya inuu nool yahay” ayuu yiri Franceis Hollande oo saxaafada kula hadlayay Maanta oo Isniin ah Magaalada Paris.
Inkastoo Al-shabaab ay ku adkeysanayso inuu nool yahay Denis Allex sidoo kalena ay Dowlada Faransiisku ku adkeysanayso inuu dhintay ayaanay hadana jirin cid ka madaxbanaan labada dhinac oo xaqiijinaysa xaalka uu ku sugan yahay sarkaalkaas oo sanadkii 2009 afduub ahaan loo qabsaday.